विचरा मेयरः पद ठूलो भएर के गर्नु, चित्त सानाे भएपछि... - Everest Dainik - News from Nepal
विचरा मेयरः पद ठूलो भएर के गर्नु, चित्त सानाे भएपछि…
गोदावरीसहित धनगढी महानगरपालिका बनाउने सपना किन देख्दैनन नेताहरु ?
“साला, तिनीहरुको दुई तिहाई छ भनेर हुन्छ ?” एकजना ठूलै कदका मानिस कुर्लिए, “म पनि देखाई दिन्छु, मैले भनेजस्तो नहोस् त ?”
यो “अति सभ्य” भाषा चिया पसलमा झगडा हुँदा बोलिएको होइन । न त गाउँमा कुलो या पँधेरोको झगडा हुँदा अभिव्यक्त भएको हो ।
बरु, यो भाषा देशको एउटा प्रतिष्ठित उप महानगरपालिका प्रमुखको हो ।
उप महानगरपालिका अर्थात् अहिलेको शासन प्रणालीमा एउटा महत्वपूर्ण निकाय । करिब तीन चारवटा निर्वाचन क्षेत्र बराबर भूगोलका बासिन्दाले विजय गराएर शासन प्रणाली चलाउने ठाउँ ।
यो पदको आफ्नै गरिमा छ ।
यो पदको आफ्नै प्रतिष्ठा छ ।
र, यो पदमा आसीन व्यक्ति भविष्यमा सांसद, प्रदेश मन्त्री, मुख्यमन्त्री र संघीय मन्त्रीको सोझो दावेदार मानिन्छ ।
र, यो पद त्यो नगर क्षेत्रका लागि मात्रै आदरणीय हुन्न, बरु उसले जिल्ला, प्रदेश र देशलाई नै आफ्नो सोचेर काम गर्नुपर्ने नैतिकता बोकेको हुन्छ ।
एउटा स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त हुँदैन । अर्को स्थानीय तहसँग उसको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । आपसमा जोडिएका कैयन साझा योजना र कार्यक्रम हुन्छन् । त्यो अर्थमा एउटा स्थानीय तहले अन्य स्थानीय तहको विकास, समृद्धि र योजनाहरुमा समेत उत्तिकै सहभागिता जनाएको हुन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा हरेक स्थानीय तह अन्ततः संविधान, कानुन र त्यसअनुरुपको शासन प्रणालीका मजबूत आधार पनि हुन ।
र, यस्तो गम्भीर र जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिको भाषा छूद्र हुन्छ, अश्लील हुन्छ, गाली बेइज्जतीको हुन्छ र आक्रोशको सीमा उसले सबै नैतिकता र मर्यादा बिर्सियो भने ?
त्यसपछि ‘विचरा भन्नुबाहेक हाम्रा सामु अरु कुनै विकल्प बाँकी रहन्न ।”
र, अहिले त्यही कुरा देखिएको छ ।
धनगढी उप महानगरपालिकामा ।
त्यहाँका प्रमुख नृप वड अहिले चर्चामा छन ।
चर्चामा छ उनको बोली ।
चर्को र कर्कश बोली ।
त्यो बोलीले मात्र आफ्नो हेर्छ,
देश हेर्दैन, प्रदेश हेर्दैन ।
उनले धनगढी नगरपालिकाको सीमाभन्दा १५, २० किलोमिटर पनि टाढा नभएको स्थानमा राजधानी प्रस्ताव गर्दा चर्को बिरोध गरे । यो उनको ओछो र लघु मनोदशाको प्रवृत्ति थियो ।
लाग्छ, उनी त्यही उप महानगरपालिकाको सीमानालाई बेग्लै राज्य या देश मानेर बसेका छन् । अझ त्यसमा पनि धनगढी बजारलाई ।
प्रदेश सरकारले सबै प्रकारका सम्भावना अध्ययन गरेर प्रदेशको राजधानी पहाड र तराई जोड्ने बिन्दू गोदावरीमा राखेपछि यी वडको भारी वजन एकाएक पग्लिन शुरु भएको हो ।
र, यिनले घोषणा नै गरे– राजधानी धनगढीबाट सारे सबै जलाइदिन्छु । सबै ध्वस्त गरिदिन्छु । सबैलाई थुनिदिन्छु… सालाहरु… आदि इत्यादी ।
यदि यिनको मुखबाट राजधानी धनगढी नहुने हो भने मध्य भागतिर कतै पहाडमा बनाइयोस भन्ने सुन्दर शब्दहरु फुत्किन्थे भने…
तर फुत्केनन । बरु उनले धनगढी नगरपालिकाको सीमाभन्दा १५, २० किलोमिटर पनि टाढा नभएको स्थानमा राजधानी प्रस्ताव गर्दा चर्को बिरोध गरे ।
यो उनको ओछो र लघु मनोदशाको प्रवृत्ति थियो ।
त्यो कुरा यी वडले नबुझेका पक्कै छैनन होला । त्यसो हो भने उनको बिरोध राजधानी गोदावरीसँग छैन बरु तर वडको सरोकार मात्र धनगढी बजारसँग छ, आखिर किन ?
यदि उनी सही अर्थमा राजनीतिज्ञ हुन्थे भने उनले निर्णयको स्वागत गर्थे र चित्त नबुझे गोदावरीबाट अझ उत्तरतिर राजधानी सार्न वैकल्पिक प्रस्ताव गर्थे ।
त्यसो भएको भए नौ वटै जिल्लाका वासिन्दाले उनलाई सम्मान गर्थे ।
तर उनले बिरोध मात्र गरेनन निकै असभ्य भाषा नै प्रयोग गरे ।
एउटा राजनीतिज्ञलाई नसुहाउने भाषा ।
स्थानीय निर्वाचनमा चर्चित हस्तीहरुलाई हराउँदै यी वड नगर प्रमुखमा विजय भएका थिए । त्यतिखेर धनगढीको राजनीतिक तथा क्षेत्रीय मनोविज्ञान यिनको जीतको मुख्य आधार थियो । र, त्यो जीतसँगै उनी दलित समुदायबाट नगरप्रमुख बन्ने पहिलो व्यक्ति समेत बनेका थिए । जुझारु स्वभावका वडले एउटा ठूलो सम्मान पाउन सफल भएका थिए ।
तर अहिले उनले उदगार गरेको शब्दहरुले उनको कद निकै सीमित गरिदिएको छ । उनको सामाजिक सञ्जाल र आम जनमानसमा आलोचना शुरु भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस ‘राजधानी कुनै हालतमा सार्न दिन्नौं, प्रदेशको नाम पनि सच्याऊ'
गोदावरी राजधानी हुँदा उनलाई आपत्ती हुन्छ भने धनगढी नगरपालिकाकै कुनै छेउछाउको स्थानमा राजधानी तोकेको भएपनि यिनले बिरोध नै गर्ने रहेछन भन्ने अहिले कतिपयले भन्न थालेका छन् ।
कतिपयले त यिनले धनगढी राजधानी बन्ने भएपछि त्यससँग जोडिएको रियल स्टेट र उद्योगलगायतका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना पहिल्याएका थिए भन्ने पनि भन्न थालेका छन् । यी कुरा पुष्टि गर्ने आधार छैन । तर उनले जसरी अहिले १५ किलोमिटर टाढाको स्थानलाई समेत अस्वीकार गरिरहेका छन, त्यसबाट उनी दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
स्थानीय तहको संरचना हुँदा गोदावरीलाई समेत मिलाएर धनगढीलाई महानगरपालिका बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो । भविष्यमा यो सम्भावना नभएको होइन । गोदावरी पनि मिलाउन सकिएअहिलेको राजधानी स्वतः धनगढी महानगरपालिकामा पर्न जान्छ । त्यो निकै प्रबल सम्भावना पनि हो । त्यो कुरा यी वडले नबुझेका पक्कै छैनन होला । तर उनको बिरोध राजधानी गोदावरीसँग छैन बरु तर वडको सरोकार मात्र धनगढी बजारसँग छ, आखिर किन ?
के छ धनगढी बजार नजिक ?
यसको जवाफ बिस्तारै प्रकट हुँदै जानेछ ।
नत्र महानगरपालिकाका लागि भोलीका दिनमा पहल गर्नैपर्ने क्षेत्रमा राजधानी हुँदा झनै स्वागत गर्नुपर्नेमा यिनले निकै तल्लोस्तरमा कुर्लिनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
ट्याग्स: Godavari, Nrip Od, Pradesh 7